Regimen neThermomix - Hutano uye chikafu mabikirwo | ThermoRecipes
Kana isu tasvika padyo nezhizha isu tinowanzo garo ita zvakasiyana dhayeti uye mapepeti akareruka kuitira kuti utaridzike zvakanaka neswimsuits kana bikini, ndosaka zvakakosha kuita kudya kwakanaka izvo zvine hutano uye izvo, zvirinani pane kuva ne Thermomix.
Mapepa ane hutano Thermomix
Si buscas madhayeti ekudyaUine Thermomix unogona kugadzira iwo madhishi akaomeswa, mumuto wawo, akachekwa kana kugadzira izvo zvinongedzo zveimwe yekuwedzera madhishi, nekuti chikafu chakanaka chinofanira kugara chichiperekedzwa nezvakanakisa zvigadzirwa uye zvisina mafuta. Unogona kuwana pano zvese zvakanakisa mu nzira dzakanaka dzekudya kwakanaka.
Aya marudzi emidziyo anokurudzirwawo kwazvo pakupera kwezuva uye yakawanda yemidziyo yaunowana pano iri mapepeti akareruka ekudya kwemanheru kunyangwe iwe uchigona zvakare kunakidzwa navo pakudya.
kubudikidza Mayra Fernandez Joglar inoita 5 mwedzi .
Kurwisa kuwandisa kweKisimusi kuri nyore kwazvo nekuunganidzwa kwegumi masobho akareruka zvakare ari nyore mabikirwo ...
Green bhinzi muto nemapatatisi
kubudikidza Irene Arcas inoita 6 mwedzi .
Nhasi ndinokuunzira iresipi yakapusa. Izvozvi zvave kutanga kupora pasi, kunyanya husiku, ...
Chaizvoizvo, izvi hazvisi kuti iri resipi yepakutanga. Iri resipi randakaverenga painternet uye ...
Anokosha akaputirwa aubergines
Kana wandaishanda naye akauya nendiro iyi kuti adye kubasa uye ndakaiedza, ndaiziva kuti ndaizoigadzira mu ...
Artichokes ne ham uye doro
kubudikidza Elena Calderon inoita 7 mwedzi .
Artichokes ndeimwe yemiriwo yandinoda zvakanyanya, zvakare yakakosha pakudya. Iyi nzira ndeye ...
Artichokes ane ham
kubudikidza Silvia Benito inoita 7 mwedzi .
Iyi kamukira ye artichokes ne ham ndeimwe yeiyo inondiyeuchidza nezvaambuya vangu. Pese paaiuya kuzotiona ...
Macaroni ine broccoli uye ham
kubudikidza Irene Arcas inoita 8 mwedzi .
Iyi kamukira yanga iri zvishoma zvekugadzirwa, zvinoenderana nezvisanganiswa zvandanga ndichiwana mufiriji yangu. Iniwo ndaida chimwe chinhu ...
Mazai ane zai rakabiwa
kubudikidza Elena Calderon inoita 8 mwedzi .
Iyi iresipi ine hutano uye panguva imwechete yakapfuma. Izvo zvakanaka kuti tizvichengete pachedu zvishoma uye chengeta
Peas ne ham
kubudikidza Silvia Benito inoita 8 mwedzi .
Iyi resipi inobva mubhuku reThermomix® Chengetedza hutano hwako. Bhuku randinoda kune huwandu hweresipi ...
Kukohwa kirimu (kirimu yemuriwo)
kubudikidza Elena Calderon inoita 9 mwedzi .
Iyo inonaka yemiriwo kirimu, iyo inonzi "shandisa" nekuti tinogona kuigadzira nemiriwo yatinayo mu ...
Yakazara chipanje keke nemichero, nzungu uye mazambiringa akaomeswa
Iri ndiro rekutanga keke randinogadzira, asi ndinokuvimbisa kuti harizove rekupedzisira, ndakarida! Almost…
Yakapiswa senge asparagus
Kirimu ye broccoli
Veggie Mashiripiti Burgers
Leek, karoti uye potato cream
Sipinachi kirimu béchamel
Detoxifying apple, cucumber uye celery muto
Maitiro ekugadzira akachekwa mazai (nhanho nhanho)